Shanta beddel ee ugu wanaagsan Spotify ee Android | Androidsis
Eder Ferreno | 13/10/2021 16:00 | Codsiyada Android, Streaming
Spotify waa barnaamijka qulqulka muusigga ee heer sare ah ka mid ah dadka isticmaala Android. Barnaamij aan heli karno annaga oo aan lacag bixin, ayaa ugu mahadceliyay nuqulkiisii ​​bilaashka ahaa ee xayeysiisyada, iyo sidoo kale lahaanshaha nooc qaali ah. In kasta oo xaqiiqda ah inay tahay barnaamij caan ah, oo leh buugga muusig aad u weyn, haddana waxaa jira isticmaaleyaal raadinaya beddellada Spotify ee Android.
Haddii tani ay tahay kiiskaaga, haddii aad raadinaysay beddello u ah Spotify for Android, waxaan hoos kuugu reebnay codsiyada ugu fiican ee aad ka soo dejisan karto taleefankaaga. Waad ku mahadsan tahay waxaad awoodi doontaa inaad hesho shaqooyin isku mid ah oo dalabka qulqulka iswiidhishka ee caanka ah uu na siinayo oo sidaas ugu raaxaysan karto muusigga taleefankaaga hab fudud.
Qeybta barnaamijyada qulqulka muusikada Waxay leedahay magacyo badan oo caan ah, marka waxaan had iyo jeer helnaa ikhtiyaarro xiiso leh oo ku saabsan arrintan. Ama haddii aan raadinaynno app leh buugga muusigga ballaaran ama aan dooneyno mid na siin doona codka ugu fiican markaan dhageysaneyno muusigga, ama haddii aan daneyneyno inaan helno shaqooyinka qaarkood, tusaale ahaan, aanan joogin Spotify hadda.
Dukaanka Play -ka waxaan ka helnaa barnaamijyo badan oo arimahan ah, marka had iyo jeer waxaa jiri doona wax inagu habboon iyo waxa aan uga baahan nahay arrintan. Haddii aad raadinayso beddellada Spotify ee Android, kuwani waa shanta arji ee ugu fiican oo aan hadda soo dejisan karno.
2 Muusikada Amazon (iyo Muusikada Amazon Unlimited)
Deezer waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo Spotify in aan hadda ka soo dejisan karno Android. Codsigan wuxuu leeyahay buugga muusigga oo aad u ballaaran, oo la mid ah kan dalabka qulqulka Swedishka (in ka badan 70 milyan oo heeso). Intaa waxaa sii dheer, waxaan sidoo kale helnaa xulasho ballaaran oo podcasts ah oo laga heli karo, maadaama tani ay tahay wax annaga na xiiseynaya xaalado badan sidoo kale. Codsigu wuxuu u taagan yahay inuu sidoo kale na siinayo xoogaa shaqooyin xiiso leh oo dheeri ah sida nidaamkeeda u gaarka ah si loo garto heesaha, oo loo yaqaan SongCatcher. Shaqadani waxay ku saleysan tahay Shazam waana hab lagu garto cinwaanka hees kasta oo hadda ka dhex socota barnaamijka.
Codsigu wuxuu na siiyaa shaqooyin isku mid ah kuwii aan hore ugu naqaannay Spotify, oo leh interface raaxo leh si loo isticmaalo. Waxaan sidoo kale haysannaa suurtogalnimada muusig ku ciyaar adigoon ku xirnayn internet, mid ka mid ah shaqooyinkaas oo si gaar ah u xiiseynaya adeegsadayaasha Android. Waxaan ku abuuri karnaa liisas -cayaar -yahanno u gaar ah, sidoo kale waxaan ku arki karnaa heesaha heesaha aan dhegeysaneyno shaashadda moobilka.
Deezer si bilaash ah ayaa loogala soo degsan karaa taleefankeena Android Dukaanka Google Play. Sida Spotify, wuxuu leeyahay qorshe noo saamaxaya inaan bilaash ugu adeegsanno xayeysiisyada gudaha, inta u dhaxaysa heesaha. Intaa waxaa dheer, waxaa jira laba qorshe lacag -bixin: qorshaha caymiska oo qiimihiisu yahay 9,99 euro bishii iyo qorshaha qoyska, kaas oo oggolaanaya illaa lix koonto oo qiimihiisu yahay 14,99 euro bishii. Waxaad ka soo dejisan kartaa appkan xiriirkan:
Deezer - Muusig iyo Boodhadh
Muusikada Amazon (iyo Muusikada Amazon Unlimited)
Codsi kale oo qulqulka muusikada caan ah, kaas oo lagu soo bandhigay sida mid kale oo ka mid ah beddelka ugu wanaagsan ee Spotify ee Android. Barnaamijkan wuxuu horumar wanaagsan ka sameynayay suuqa wuxuuna leeyahay buugga muusigga oo sii kordhaya. Sidoo kale, waxaa jira waqtiyo ay fanaaniinta qaarkood sii daayaan heesahooda si gaar ah barnaamijkan. Waa codsi ku jira rukunkaaga Amazon Prime, sidaa darteed haddii aad mid leedahay, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato mar walba adigoon bixin lacag dheeraad ah.
Xaaladdan waxaan runtii ka hadlaynaa laba barnaamij, maadaama dhinac aan ka haysanno Amazon Music oo ah kan lagu daray Prime, laakiin waxay leedahay heeso ka yar. Dhinaca kale waxaan ka helnaa Amazon Music Unlimited, kaas oo leh buug -yaraha muusikada oo aad u ballaadhan, oo leh in ka badan 70 milyan oo heeso. Kani waa barnaamij aan ku jirin Amazon Prime, laakiin waa inaan bixinnaa 9,99 euro bishii si aan u adeegsanno, laakiin waxay na siin doontaa xulashooyin badan, iyo sidoo kale helitaanka heeso aad u tiro badan. Marka lagu daro heesaha, waxaan sidoo kale heysanaa xulasho wanaagsan oo podcasts ah oo la heli karo, qaarkoodna waxay ku gaar yihiin barnaamijka, marka taasi waa dhinac kale oo maskaxda lagu hayo.
Isticmaalayaasha aan raadinayn buug -yarahan oo kale, Amazon Music si fiican bay u shaqayn kartaa. In kasta oo xiddigga kiiskan, oo ah midka ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo Spotify on Android, uu yahay Music Unlimited. Shirkaddu waxay badanaa samaysaa dallacsiin si aan u heli karno helitaan bilaash ah dhowr bilood ama aan bixinno wax ka yar bil kasta diiwaangelintaada, tusaale ahaan. Markaa waa ikhtiyaar wanaagsan in la tixgeliyo oo sidaas awoodi karto in la tijaabiyo, si loo arko haddii ay tahay beddelka Spotify ee aan ka raadinaynay kiiskayaga.
Muusikada Amazon: Dhegayso Podcasts
Apple Music waa barnaamijka qulqulka muusigga ee Apple, kaas oo aan sidoo kale ka soo dejisan karno taleefankeenna Android waana mid kale oo lagu beddeli karo Spotify oo ay tahay inaan tixgelino. Waa codsi leh buugga muusig aad u weyn oo ka badan 60 milyan oo heeso, oo leh cinwaano badan oo si gaar ah loogu sii daayay barnaamijka, oo aadan awoodi doonin inaad dhegeysato haddii kale. Markaa waa ikhtiyaar wanaagsan inaad tixgeliso haddii aad qiimeyso helitaanka heesaha ama cajalladaha si gaar ah loogu sameeyay barnaamijkan.
Codsiga ayaa u oggolow inaad keydiso diiwaannada iyo heesaha aan jecel nahay, iyo sidoo kale sameynta liisaskeena u gaarka ah. Intaa waxaa dheer, waxaan sahamin karnaa idaacadaha ama waxaan ka ogaan karnaa podcasts gudaha ama dokumentiyo yaryar oo ku saabsan fannaaniinta na xiiseeya. Waxaan sidoo kale arki karnaa kuwaas oo ah heesaha ugu caansan xilligan ee liisaska kala duwan ee uu abuuray app laftiisa. Hawlaheeda waxaa ka mid ah inaan sidoo kale ku ciyaarno heeso aan lahayn xiriir internet.
Apple Music waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu beddeli karo Spotify oo leh rukunno -bixinno keliya. Waxay leedahay qorshe isdiiwaangalin aasaasi ah oo qiimihiisu yahay 9,99 euro bishii (4,99 euro marka laga hadlayo arday ahaanshaha), iyo sidoo kale qorshe qoys ilaa lix qof oo qiimihiisu yahay 14,99 euro bishii. Nasiib wanaag, waxaa ku jira app tijaabo lacag la'aan ah (badiyaa hal bil), si aad u ogaato inay tahay waxa aad raadineyso. Waxaad ka soo dejisan kartaa Play Store -ka hoose:
Wixii kuwa raadinaya codsi meesha tayada codka waa wax aad muhiim u ah, Tidal waa barnaamijkii aad raadinaysay. Waa mid ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan ee lagu beddeli karo Spotify for Android oo aan ka heli karno. Waa codsi ay leeyihiin fannaaniin badan oo caan ah (Jay-Z, Beyoncé, Rihanna….) Kuwaas oo doonaya inay fannaaniinta siiyaan boqolkiiba dakhli ka wanaagsan, marka la barbardhigo barnaamijyada kale sida Spotify oo wax yar laga bixiyo qulqulka kasta.
Gudaha arjiga waxaan ka helnaa buug -yare ka badan 70 milyan oo heeso. Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay shaqooyin sida muusikada oo la ciyaaro iyada oo aan la xiriirin internetka ama aan awoodno inaan heesaha u beddelno si aan xad lahayn. In kasta oo dhammaan shaqooyinka aan ku hayno arjiga la bixiyo. Marka lagu daro heesaha, waxaan ka helnaa in ka badan 250.000 fiidiyow oo laga heli karo arjiga dhexdiisa. Dhanka dhawaaqa, waxaan heysanaa dhawaaq qeexitaan sare mar walba, iyo sidoo kale HiFi oo la heli karo.
Nooca caadiga ah ee Tidal waxaa lagu qiimeeyaa 9,99 euro bishii, halka haddii aad rabto inaad ku raaxaysato tayada HiFi ee heesaha, qiimuhu waa 19,99 euro bishii. Maaha appka ugu caansan goobtan, maxaa yeelay waa qaali, laakiin waa mid ka mid ah beddellada ugu dhammaystiran ee Spotify ee aan hadda helno.
TIDAL - Gelinta Muusikada
Pandora waa mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan Spotify ee Android ee adeegsadayaasha. Waa codsi aad ugu eg Spotify marka loo eego shaqooyinka, markaa waa ikhtiyaar wanaagsan haddii aad raadinaysay wax la mid ah. Barnaamijkan wuxuu u taagan yahay inuu lahaado liis gareynta heesaha iyo podcasts ee ugu ballaaran, sidaa darteed waxaad had iyo jeer awood u yeelan doontaa inaad ku dhegeysato heesaha aad ugu jeceshahay gudaheeda. Intaa waxaa dheer, waxay na siisaa shaqooyin la mid ah kuwii aan hore ugu naqaanay barnaamijka qulqulka Swedishka.
Waxaan awoodi doonnaa inaan ku darno heesaha liisaskayaga si raaxo guud leh, iyo sidoo kale inaan ciyaarno heeso aan lahayn xiriir internet. Intaa waxaa sii dheer, dalabku wuxuu leeyahay taageero amarrada codka, si ay suurtagal u tahay in la joojiyo heesaha, laga boodo heesaha ama dib loo bilaabo dib -u -ciyaarista iyadoo la adeegsanayo amarka codka. Tani waa wax shaki la'aan gacan ka geysanaya adeegsiga aad ugu raaxada badan abka mar walba taleefankeena Android.
Sida barnaamijyada kale ee liiskan ku jira, Pandora waxay kaliya bixisay rukunno. Nooca caadiga ah ee dalabka wuxuu leeyahay kharash dhan 4,99 euro bishii ama 54,98 euro haddii aan dooranno inaan ku bixinno sannadka oo dhan hal lacag. Pandora Premium wuxuu leeyahay kharash dhan 9,99 euro bishii ama 108,89 euro sanadkii haddii lagu bixiyo hal lacag. Codsiga wuxuu kaloo leeyahay qiimo dhimis loogu talagalay ardayda ama qorshayaasha qoyska, si aad uga raqiisiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » XNUMX -ta beddel ee ugu sarreeya Spotify ee loogu talagalay Android
Waxaan had iyo jeer adeegsan karnaa YouTube Music, isku dhafan, oo ka socda Google, iyada oo aan la qorin iyo diiwaangelin la'aan, buugga ugu fiican, kaas oo lacag badan siiya fannaaniinta ...
Laakiin waxaan u malaynayaa in gudaha Android ay ka fiican tahay in lagu taliyo kan Apple ...
Realme 8i: sharad cusub oo loogu talagalay dhexda dhexe oo leh astaamo wanaagsan
Xagee laga daawadaa dhammaan xilliyada South Park ee Isbaanishka